तपाईंको व्यवसाय को उन्नत को लागी स्थानीय एसईओ को पूरा गाईड - Froggy विज्ञापन
स्थानीय एसईओ के हो?
स्थानीय एसईओ एक प्रकारको एसईओ हो विशेष गरी खोज ईन्जिनलाई अनुकूलन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, विशेष गरी स्थानीय व्यवसायहरूको लागि। स्थानीय एसईओ को उपयोग गरेर, तपाईंको व्यवसाय गुगल खोजी परिणामहरूको पहिलो पृष्ठमा देखा पर्नेछ, विशेष गरी 'नक्शा प्याक' र 'अर्गानिक लिस्टि।' मा।
सुरुमा, एसईओ र बीच धेरै भिन्नता थिएन स्थानीय एसईओ। तर अहिलेको लागि, स्थानीय एसईओ ले तपाईंलाई व्यापार अनुकूलन गर्न मद्दत गर्दछ जब मानिसहरूले वरपरका स्थानमा ठाउँ खोजिरहेका हुन्छन्।
कल्पना गर्नुहोस् यदि तपाईं टोमाng्गमा एक रेस्टुरेन्ट छ, के तपाईंको रेस्टुरेन्ट गुगलमा देखिन्छ? तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि यदि तपाईंको गुगल गुगल खोजी परिणामहरूको पहिलो पृष्ठमा देखा पर्‍यो, तपाईं अधिक ट्राफिक र उपभोक्ताहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यो कारण हो कि स्थानीय एसईओ तपाईंको व्यवसायको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यस प्रकारको एसईओ पनि स्मार्टफोनको प्रयोगको बढ्दो संख्याको साथ बढ्दो आवश्यकताको पूर्वानुमान गरिएको छ।
वर्तमानमा धेरै व्यक्तिले आफ्नो स्मार्टफोनहरू छिटो समाधानहरू फेला पार्नको लागि प्रयोग गर्दछन्, ब्यापार स्थानहरू फेला पार्न र नजिकको स्थानमा चाहिने चीजहरू खरीद गर्नका लागि।
यदि तपाइँको ब्यापार जानकारी खोज इञ्जिनको पहिलो पृष्ठ मा देखा पर्दछ, कल्पना गर्नुहोस् कि यो तपाइँको व्यवसाय को लागी कती लाभदायक छ। तपाईलाई उच्च बनाउँदैन दर-क्लिक दर (CTR), तर अधिक उपभोक्ताहरूको संख्या।
केवल अन्य एसईओ रणनीतिहरू जस्तै, स्थानीय एसईओ धेरै प्राविधिक लाग्न सक्छ। जहाँसम्म, मिडियामा तपाईंको व्यवसायको विज्ञापन गर्ने वा ब्रोन्सर वितरण गर्ने जस्तो परम्परागत मार्केटिंग रणनीतिहरूको तुलनामा स्थानीय एसईओ अधिक प्रभावकारी र सस्तो मार्केटिंग रणनीति हो। दुबै परम्परागत विपणन रणनीतिहरूलाई धेरै लागत आवश्यक पर्दछ। यसका साथै तपाईले वितरण च्यानल पनि निर्धारित गर्न सक्नुहुन्न जो तपाईंको विभाजन को आधारमा छ ताकि तपाईं यी दुई परम्परागत रणनीतिहरूको प्रदर्शन मापन गर्न सक्नुहुन्न।
यदि तपाईं स्थानीय एसईओ प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यो रणनीति र जैविक खोजी ट्राफिक मार्फत कति ट्राफिक, सीसा, र उपभोक्ताहरू देख्न सक्नुहुनेछ। स्थानीय एसईओ लाई पनि धेरै लागतको आवश्यक पर्दैन र तपाईको व्यवसायलाई अझ प्रभावकारिताका साथ सहयोग पुर्‍याउन सक्छ यदि तपाईले गुगल खोजी परिणामको पहिलो पृष्ठमा सफलतापूर्वक व्यवसाय राख्नु भयो भने।
तपाईंहरू जो स्थानीय एसईओ र रणनीतिहरूको बारेमा बढी सिक्न चाहानुहुन्छ, हामी स्थानीय एसईओ सुरु गर्न तपाईंले गर्न सक्ने चरणहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं। यसका साथै, त्यहाँ वेबसाइटहरू अनुकूलित गर्नको लागि त्यहाँ प्राविधिक आवश्यकहरू पनि छन् ताकि वेबसाइट रैंकिंग बढ्नेछ र तपाईं अधिक बिक्री गतिविधिहरू गर्न सक्नुहुनेछ।
स्थानीय SEO अनुकूलन चरणहरू
यहाँ स्थानीय एसईओ अनुकूलन को बिभिन्न तरीकाहरु छन् जुन तपाईले प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ:
गुगल मेरो व्यापार खाता बनाउनुहोस्
गुगल मेरो व्यवसाय स्थानीय एसईओ को पहिलो चरण हो। गुगल मेरो व्यवसाय स्थानीय एसईओ को लागी एकदम महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो उपकरण बिना नै तपाईको व्यवसाय खोजी परिणाम पृष्ठमा 'स्थानीय नक्शा लिस्टिings' मा देखा पर्दैन। तपाईको गुगल मेरो व्यापार खाता सिर्जना गर्न तलका चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
गुगल मेरो व्यवसाय मा जानुहोस्
'अब सुरू गर्नुहोस्' क्लिक गर्नुहोस्
तपाईंलाई गुगल नक्शामा निर्देशित गरिनेछ जहाँ तपाईं आफ्नो व्यवसाय स्थान खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो स्थान छनौट गरेपछि, गुगलले प्रमाणीकरण अनुरोध गर्दछ कि व्यावसाय वास्तवमै तपाईंको हो। यदि तपाईं आफ्नो व्यापार फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, 'यी मध्ये कुनै पनि होइन - तपाईंको व्यवसाय थप्नुहोस्' मा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यस पछि, तपाईंलाई तपाईंको व्यावसाय जानकारी भर्न भनिन्छ, सामान्यतया व्यापार नाम, ठेगानाहरू, र टेलिफोन नम्बरहरू समावेश गर्न। निश्चित गर्नुहोस् कि यी डाटाहरू इन्टरनेटमा एकरूप छन् किनकि यसले तपाईंको 'व्यवसाय निर्माण' को माध्यम बाट तपाईंको व्यवसायलाई मद्दत पुर्‍याउँछ (जुन पछि छलफल हुनेछ)।
त्यस पछि, तपाईंलाई प्रमाणिकरण प्रक्रिया मार्फत गुगलसँग तपाईंको व्यवसाय ठेगाना सुनिश्चित गर्न सोधिनेछ।
तपाईं पनी छविहरू र तपाईंको व्यवसाय प्रोफाइलमा खुला बन्द व्यापार सहित अन्य जानकारी थप्न सक्नुहुन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले सबै महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रविष्ट गर्नुभयो।
अन्तिम चरण तपाईको ठेगानामा पठाइएको 'गुप्त पिन' को माध्यमबाट प्रमाणिकरण प्रक्रिया पूरा गर्नु हो। यसले तपाइँलाई तपाइँको व्यवसाय दाबी गर्न अनुमति दिनेछ।
तपाईले सफलतापूर्वक आफ्नो व्यवसाय दावी गर्नुभए पछि, त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तपाईले मेरो गुगल व्यवसाय पृष्ठलाई अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।
फेरी, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको ब्यापार जानकारी पूरा भएको छ। तपाईको व्यवसाय प्रोफाइल १००% सम्म नपुग्न दिनुहोस्।
व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रित गर्नको लागि एउटा रोचक प्रोफाइल तस्बिर वा लोगो छनौट गर्नुहोस् ताकि उनीहरू तपाईंको व्यवसाय वेबसाइटको भ्रमण गर्छन्।
यदि तपाइँ एक तस्वीर अपलोड गर्नुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि छवि फाइल नामले कुञ्जी शब्द लक्ष्य समावेश गर्दछ। तपाईं एक भन्दा बढि छविहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको व्यवसायको लागि सहि कोटीहरू छनौट गर्न नबिर्सनुहोस् किनभने यसले स्थानीय एसईओमा ठूलो प्रभाव पार्दछ।
तपाईंले आफ्नो नाम, ठेगाना, र टेलिफोन नम्बर लेख्न प्रयोग गर्नुहुने ढाँचा रेकर्ड गर्नुहोस्। तपाईंले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि इन्टरनेटमा प्रयोग गरिएको ढाँचा लगातार छ किनकि यसले तपाईंको स्थानीय एसईओ रणनीतिलाई पनि असर पार्दछ।
स्थानीय एसईओ को लागी रिसर्च किवर्ड
तपाईले बुझ्नु भएको छ कि कीवर्ड SEO मा एक महत्वपूर्ण कारक हो। यसैले यसले सहि कुञ्जी शब्द छान्छ ताकि तपाईंको व्यवसाय खोजी ईन्जिनहरूको पहिलो पृष्ठमा देखा पर्दछ। सहि किवर्डलाई अनुसन्धान गर्न धेरै तरिकाहरू गर्न सकिन्छ ताकि तपाईंको व्यवसाय खोजी ईन्जिन नतीजा पृष्ठमा उच्च श्रेणीमा आउँछ।
गुगल कीवर्ड प्लानर वा GKP कुञ्जीशब्द अनुसन्धानको लागि एक उपकरण हो जुन प्रायः कुञ्जीशब्द अनुसन्धानको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो उपकरणले तपाइँलाई भन्छ कि कति व्यक्ति तपाईको व्यवसायसँग मिल्दो किवर्डहरू खोज्दैछन्। यसका साथै, GKP ले महिनाको अन्त्यमा प्रत्येक कुञ्जीशब्दको लागि खोजी भोल्युमलाई पनि रूपरेखा दिन्छ ताकि तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यदि तपाइँको उद्योगमा कुञ्जी शब्द खोजीमा परिवर्तनहरू छन् भने।
पढ्नुहोस् ई-वाणिज्य को लागी एसईओ: पूर्ण गाइड र अप्टिमाइजेसन
सुरू गर्नका लागि गुगल एडवर्ड खातामा लग ईन गर्नुहोस् र खोल्नुहोस् गुगल कीवर्ड प्लानर। त्यसो भएपछि 'नयाँ कुञ्जी शब्द र विज्ञापन समूह विचारहरूको लागि खोजी गर्नुहोस्।' त्यस पछि, तपाईले केवर्डहरू प्रविष्ट गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईको व्यवसायको प्रकारसँग सम्बन्धित छ गुगल किवर्ड प्लानरमा, तपाईको व्यवसाय स्थान र स्थान छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईको लक्षित छ, र 'आईडियाज' क्लिक गर्नुहोस्।
अर्को पृष्ठमा कुञ्जी शब्द विचारहरू क्लिक गर्नुहोस् र उनीहरूले तपाईंको व्यवसायसँग सम्बन्धित कुञ्जी शब्दहरूको सूची दिन्छ।
स्थानीय व्यवसायका लागि वेबसाइट अनुकूलन गर्दा तपाईले 'स्थानीय कुञ्जी शब्द' लाई लक्षित गर्नुपर्नेछ। यो एक साधारण प्रविधि हो जहाँ तपाईं एक महत्त्वपूर्ण कीवर्डको साथ तपाईंको व्यवसायको नाम थप्नुहुन्छ जुन तपाईंको व्यवसायलाई वर्णन गर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँको व्यापार क्षेत्र सुदर्मन क्षेत्र मा स्थित एक किताब को पसल हो भने, स्थानीय कीवर्ड उदाहरण जुन तपाइँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ:
डेनिश पुस्तक पसल
डेनमार्कमा बुक स्टोर
डेनमार्क नजिक बुक स्टोर
डेनमार्कमा बुकस्टोर पूरा गर्नुहोस्
माथिको स्थानीय कुञ्जी शव्दहरूको खोजी मात्रा वास्तवमै कम छ, तर खोज ईन्जिन प्रयोगकर्ताहरूले के खोज्छन् जुन यस कुञ्जी शव्दलाई खोज्दैछ यो एकदम उपयुक्त छ। व्यक्तिहरू जसरी माथिको रूपमा कुञ्जी शव्दहरू प्रयोग गर्छन् उनीहरूसँग खरीद-अभिप्राय (खरीद उद्देश्य) उच्च छ त्यसैले रूपान्तरणको सम्भावना बढी हुन्छ।
यसका साथै तपाईले कुञ्जीशब्द परिमार्जनकर्ता पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ दुई प्रकारका परिमार्जन कुञ्जी शब्दहरू छन् जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो 'पूर्ण पुस्तक स्टोर' वा 'सस्तो किताब पसल' जस्ता वर्णन प्रयोग गर्नु हो। दोस्रो, तपाइँ तपाइँको उत्पादन वा सेवा सम्बन्धित विशेष जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं संग एक व्यापार केक छ, धेरै व्यक्ति बिभिन्न उत्सवहरुका लागि केक खोज्दैछन्। केहि परिमार्जक कुञ्जी शब्दहरू जुन तपाईं उदाहरणको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ:
नयाँ वर्ष केक
तपाईंले कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु अघि, तपाईं गुगल प्रवृत्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको सूचीमा कुञ्जी शब्दहरू अझै प्रायः खोजी गरिएका छन्। यस प्रवृत्तिलाई हेरेर, तपाई यो निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले केवल कुञ्जी शब्द प्रयोग गर्नुभयो जुन तपाईको व्यवसायलाई मद्दत गर्दछ केवल गुगल प्रचलनहरूमा गएर र तपाईले प्रयोग गर्न चाहानु भएको कुञ्जी शब्दहरूको सूची प्रविष्ट गर्नुहोस्।
स्थान र क्षेत्र छनौट गर्न नबिर्सिनुहोस् तपाईं लक्ष्य बनाउन चाहानुहुन्छ। यस तरिकाले, तपाईले उपभोक्ताहरूले क्षेत्रमा के खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुञ्जी शब्द एक क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन, तर प्राय: अन्य क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरिन्छ। गुगल ट्रेंड्स प्रयोग गरेर मात्र तपाईं यसलाई फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
स्थानीय SEO का लागि पृष्ठमा अनुकूलन
तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको यो सुनिश्चित गर्नु हो कि तपाईको गृहपृष्ठ वा ल्यान्डि page पृष्ठ गुगल द्वारा अनुक्रमित गरिएको छ। तपाईको ल्यान्डि Page पृष्ठ URL टाइप गर्न को लागी तपाईले जाँच गर्न सक्नुहुनेछ गुगल खोजीमा तपाईको वेबसाइट छ कि भनेर हेर्नका लागि।
तपाईं गुगल वेबमास्टर उपकरणहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको वेबसाइट सही तरीकाले सूचकांक गरिएको छ कि भनेर पक्का गर्नुहोस् ताकि तपाईं जरिवाना पाउनु हुन्न। तपाइँ तपाइँको वेबसाइटमा क्रल त्रुटिहरू नभएको कुरा पनि सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल वेबमास्टर उपकरण प्रयोग गर्न, तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईंको वेबसाइट गुगल एनालाइटिक्समा पनि पंजीकृत छ।
स्थानीय एसईओ मा साइट संरचना पनि धेरै महत्वपूर्ण छ। सुरू गर्नु अघि, योजना बनाउन कोसिस गर्नुहोस् साइटको संरचना तपाईले चाहानु भएको जस्तो। त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जसको बारेमा तपाईंले सोच्न आवश्यक छ; के तपाईंको व्यवसायमा एक भन्दा बढी स्थान छ? के तपाइँ तपाइँको व्यवसायले प्रस्ताव गर्ने हरेक सेवाको लागि नयाँ पृष्ठ बनाउन चाहानुहुन्छ? के तपाइँ अन्य क्षेत्रहरु लाई पनि लक्षित गर्नुहुन्छ?
यदि तपाईंको व्यवसायसँग एक भन्दा बढी स्थानहरू छन् भने, यो URL अनुकूलन गर्न राम्रो विचार हो। यद्यपि धेरैले भनेका छन् कि एउटै पृष्ठमा धेरै स्थानहरू राख्नु फरक पर्दैन किनकि Google बुझ्नको लागि पर्याप्त स्मार्ट छ, इष्टतम ढाँचामा स्थान पृष्ठ हुनुपर्दछ जुन प्रत्येक कार्यालयको विशेष स्थानमा लि has्क हुन्छ। आदर्श संरचनाको लागि, प्रत्येक कार्यालय स्थानसँग शहर URL हरू / नामहरू हुनेछन्।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार तपाईको वेबसाइटमा नाम, ठेगाना, र टेलिफोन नम्बर (वा NAP - नाम, ठेगाना, र फोन नम्बर) स्थानीय SEO का लागि महत्वपूर्ण कुञ्जीहरू हुन्। तपाईको ल्यान्डि page पृष्ठमा NAP प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ।
राम्रो नप लेख्दा, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको व्यवसायको नाम अतिरिक्त कुञ्जी शब्दहरू बिना नै सहि छ। साथै, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले प्रविष्ट गर्नुभएको ठेगाना सहि छ र तपाईंले प्रविष्ट गर्नुभएको टेलिफोन नम्बर स्थानीय हो। वेबसाइट वा ल्यान्डि page पृष्ठमा तपाईले प्रविष्ट गर्ने सबै Google मेरो व्यवसाय प्रोफाइल अनुसरण गरेको हुनुपर्दछ। यी सबै डाटा छविहरूको रूपमा, पाठको रूपमा पनि लेख्नुपर्दछ।
NAP बाहेक, तपाईंले आफ्नो अवतरण पृष्ठमा खुल्ने घण्टा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ। खुल्ने समयहरू सामान्यतया स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने व्यक्तिले खोजी गर्ने पहिलो चीज हुन्। उपभोक्ता विश्वास वृद्धि गर्न, तपाईं प्रशंसापत्र वा अन्य उपभोक्ताको समीक्षा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
अवतरण पृष्ठ सामग्रीमा नै, अन-पृष्ठ SEO रणनीति गरेर यसलाई अनुकूलन गर्न नबिर्सनुहोस्।
स्थानीय एसईओ को लागी स्कीमा मार्कअप
स्किमा मार्कअपको प्रयोगले खोज इञ्जिनहरूलाई जानकारी जारी गर्न मद्दत गर्दछ जस्तै तपाईंको व्यवसाय के हो, उपभोक्ता समीक्षा, खुल्ने समय, घटना वा घटनाहरू, र अन्य खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठमा।
हामीले माथि छलफल गर्यौं कि कसरी तपाईंको नाम, ठेगाना, र व्यवसाय फोन नम्बर राख्ने खोज ईन्जिनहरूलाई यसलाई पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। स्थान र सम्पर्क चिन्ह लगाउनाले तपाईंलाई खोजी परिणामहरूको पहिलो पृष्ठमा देखा पर्नेछ।
यदि तपाईं स्कीमा मार्केप प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, व्यक्तिहरू तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको कोडहरू हेर्न सक्षम हुँदैनन्। केवल खोज इञ्जिनहरूले गर्न सक्छन्। स्कीमा मार्कअप आफैले डिभिग ट्यागहरू प्रयोग गर्दछ र तलको रूपमा आकार दिन्छ:
पढ्नुहोस् पृष्ठ दृश्य सुधार गर्न ways तरिकाहरू
Squeaky स्वच्छ दन्त
१ Smith स्मिथ स्ट्रिट
फोन: 555 423--2352२-XNUMX-२XNUMX
Anda juga bisa menggunakan भू Coordinates Agar Google dapat Menunjukkan lokasi Anda dengan Lebih akurat। स्किमा मार्कअप अनलाइन भू भूकोपमा पठाउनुहोस्
Untuk mempermudah proes ini, Anda bisa menggunakan http://schema.org.
उद्धरण भवनको बारे नबिर्सनुहोस्
स्थानीय एसईओमा उद्धरण भवन एक महत्त्वपूर्ण चीज हो। यहाँ उल्लेखहरूले के भन्न खोजेको हो तपाईंको वेब साइटमा तपाईंको व्यवसायको नाम र ठेगाना उल्लेख गर्नु हो।
उद्धरण गुगल र बिंगको र्याकिंग एल्गोरिदममा महत्वपूर्ण कुञ्जी मध्ये एक हो। अधिक शहरहरूको साथ व्यवसाय खोजी खोजी परिणामहरूमा उच्च श्रेणीको हुनेछ। यदि तपाईंको व्यवसायले प्रख्यात र अनुक्रमित वेबसाइटहरूको प्रशारण प्राप्त गर्दछ भने, यसले गुगललाई यो सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ कि उनीहरूसँग तपाईंको व्यवसायको बारेमा डाटा र जानकारी सत्य छन्।
सुरु गर्नु अघि तपाईले पहिले लेखापरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। केहि उपकरणहरू वा वेबसाइटहरू जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ब्राइटलोकल, स्थानीय मोज, ह्वाइटस्पार्क, र येक्स्ट। माथिका चार उपकरणहरूले तपाईंलाई निम्न जाँच गर्न मद्दत गर्न सक्दछ:
यदि गुगल लिस्टिंगमा तपाईंको NAP मा त्रुटि छ भने
नक्सामा स्थान अब तपाईंको ठेगाना बराबर छ
त्यहाँ एक नक्कल सूची छ
त्यस पछि, तपाइँ उद्धरण भवन बनाउन सुरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं राष्ट्रिय वा स्थानीय अनलाइन डाइरेक्टरी साइटहरू खोजी गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको व्यवसाय उद्योगलाई पछ्याउँदै छ र तपाईंको व्यवसायलाई डाइरेक्टरीमा प्रविष्ट गर्दछ। यो अनलाईन डाइरेक्टरी गुगल मेरो व्यवसाय, बिंग स्थानहरू, र फेसबुक जस्ता सामाजिक मिडिया हुन सक्छ जहाँ तपाईं आफ्नो व्यवसायको लागि विशेष पृष्ठ बनाउन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं उद्धरण निर्माण गर्न जारी राख्नुहुन्छ भने, सम्भावना यो छ कि तपाईंको व्यवसाय खोजी परिणाम पृष्ठमा पूर्ण र सही डाटाको साथ उच्च रैंक प्राप्त गर्दछ।
लिंक विश्लेषण गर्नुहोस्
विश्लेषण लि doing्क गर्ने उद्देश्य भनेको यो हो कि तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँको व्यवसाय वेबसाइट कसरी प्रतिस्पर्धाहरूसँग तुलना गरिन्छ।
त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जुन तपाईं विश्लेषण लि link्क गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्राधिकरण डोमेन र पृष्ठ प्राधिकरण ल्यान्डि Page पृष्ठ अवलोकन गर्न, तपाईं मोजबार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक पूर्ण विश्लेषण हेर्नको लागि, तपाईं सेमृश जस्ता वेबसाइट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यी वेबसाइटहरूले हामीलाई कति ब्याकलिks्कहरू लिन्छन् र स्प्याम्मी लि are्कहरू छन् जुन हाम्रो वेबसाइटमा जडित छन् भनेर बताउँछ।
यसका साथै तपाईले जाँच गर्नुपर्नेछ कि तपाईको वेबसाइटले गुगलबाट जरिवाना पाउँदछ। यो हेर्नका लागि तपाई गुगल वेबमास्टर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँको वेबमास्टर खातामा लग इन गर्नुहोस्, ट्राफिक खोजी छान्नुहोस्, र म्यानुअल कार्यहरू चयन गर्नुहोस् कि तपाइँको वेबसाइटले कुनै दण्ड लगाएको छैन।
गुगलले एल्गोरिथ्म मार्फत तपाईको वेबसाइटलाई जरिवाना पनि दिन सक्छ। यसलाई हेर्नको लागि, तपाईं गुगल एनालिटिक्स प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र हेर्नुहोस् यदि त्यहाँ यातायात मा ठूलो कमी छ र कुनै कारण बिना। यदि यो हुन्छ भने, तपाइँको वेबसाइट को लागी गुगल बाट पेनल्टी एल्गोरिथ्म हुन सक्छ।
तपाईंको प्रतिस्पर्धा विश्लेषण गर्नुहोस्
प्रतियोगिताको विश्लेषणले तपाईंलाई तपाईंको स्थानीय SEO रणनीति विकास गर्न मद्दत गर्दछ। केहि चीजहरू जुन तपाईको प्रतिस्पर्धाको विश्लेषण पछि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
तपाईको जो कोहीलाई स्थानीय कुञ्जी शव्दहरूको प्रतिस्पर्धी भेट्न सक्नुहुन्छ
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि ब्याकलिks्क तपाईका प्रतिस्पर्धीहरुबाट हुन सक्छ
तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि क्याटेसन तपाईंको प्रतिस्पर्धीको स्वामित्वमा छ
तपाई कतिवटा समीक्षा चाहिन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईको व्यवसायले खोज परिणाम पृष्ठमा उच्च दर प्राप्त गर्न सक्छ।
प्रतिस्पर्धीहरूको खोजी गर्न, तपाईं केवल स्थानीय कुञ्जी शब्द प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं आफ्नो व्यवसायको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसो भए, तपाईले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूले प्राप्त गरेको ब्याकलिंक्सलाई वेबसाइट यूआरएलमा अहरेफ्स र मजेस्टिक जस्ता प्रविष्टि गरेर देख्न सक्नुहुन्छ।
चीजहरू तपाईंले ध्यान दिनु पर्दछ डोमेन अधिकार, पृष्ठ प्राधिकरण, र लिंकहरू जुन उनीहरूले गर्न सक्दछन्। यसले तपाईंलाई तिनीहरूको व्यवसाय कत्तिको लोकप्रिय छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ।
यसका साथै तपाईले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीय ट्राफिकको पनि विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। उपकरण यो काम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ Semrush किनभने तिनीहरू एक वेबसाइट को ट्राफिक को बारे मा पूरा डाटा प्रदान गर्दछ जस्तै औसत ट्राफिक हरेक महिना एक वेबसाइट प्राप्त, जैविक यातायात र भुक्तान ट्राफिक र उनीहरुले गर्न सक्छन् यातायात बाट डेस्कटपबाट र मोबाइल।
तपाईं कुन कुञ्जी शब्दहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ कि यसले उनीहरूलाई धेरै यातायात प्राप्त गर्दछ ताकि तपाईं पनि नयाँ कुञ्जी शब्द प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
समीक्षा तपाइँको प्रतिस्पर्धी को व्यवसाय कसरी छ हेर्न को लागी एक तरीका हो। तपाईंले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई मात्र हेर्नुपर्नेछ र उनीहरूसँग कति समीक्षा छन् र हेर्नुहोला कि समीक्षा सकारात्मक वा नकारात्मक हुन सक्छ। यो गरेर, तपाईले कसरी थाहा पाउनु हुन्छ कि तपाईको व्यवसायलाई उनीहरुको ब्यापार संग कसरी तुलना गरीन्छ।
ठिक छ, अब तपाईलाई थाहा छ स्थानीय एसईओ के हो र कसरी स्थानीय एसईओ लाई अनुकूलित गर्ने। आशा छ यसले तपाईंको व्यवसायलाई मद्दत गर्न सक्दछ!
»१ Cheap सस्तो SEO उपकरणहरू, नि: शुल्क, र तपाईंको वेबसाइट विश्लेषण गर्न उत्तम
Rec एक पारस्परिक लिंक के हो र यसले एसईओ वेबसाइटलाई कसरी असर गर्छ?
Google Google मा कसरी पहिलो श्रेणीकरण प्राप्त गर्ने
»व्यापार ट्र्याकिंग उपकरणको रूपमा Google एनालिटिक्स कसरी प्रयोग गर्ने
SEO SEO copywriting निर्देशिका।